बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन बाहिरियो १३ अर्ब, कर्जा परिचालनको अवस्था कस्तो ? - Aathikbazarnews.com बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन बाहिरियो १३ अर्ब, कर्जा परिचालनको अवस्था कस्तो ? -
बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन बाहिरियो १३ अर्ब, कर्जा परिचालनको अवस्था कस्तो ?
बैंकिङ प्रणालीबाट एकैदिन १३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चैत ९ गते एकैदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १३ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो । योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत ८ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ४८ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । चैत ९ गते वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप भने १४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत चैत ८ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा चैत ९ मा घटेर ४३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह भने स्थिर रहेको छ । गत चैत ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल ४६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेकोमा चैत ९ गते पनि कर्जा परिचालनको अवस्था ४६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँमै सिमित रहेको छ । चैत ९ मा बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो बढेर ९०.९६ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री देखि वडाअध्यक्ष सम्मको बैंक खाता निगरानीमा
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको नाफा ९५% ले बढ्यो
सेवा मनि ट्रान्सफर र हङकङको केएमई रेमिटेन्सबीच सम्झौता, हङकङबाट रकम पठाउन सकिने
म आम उद्योग व्यवसायी साथीहरुको साझा उम्मेदवार हुँ
नेपाल एसबिआई बैंकले गर्यो जानकी मन्दिर १२ वटा डस्टबिन